Ishishini loPhando ngeLizwi | Martech Zone
Ishishini loPhando ngeLizwi
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 6, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
le is Iposi exhasiweyo. Ngexabiso lendawo yeinjini yokukhangela iphakame kakhulu, ayimangalisi into yokuba izixhobo zophando ziyavela kuyo yonke indawo kwiwebhu. Ndisebenzisa ILizwiTracker Kwibhlog yam, kuba ine-plugin ekulula ukuyisebenzisa yokufumana ezona tag zintle zezithuba zakho.
Ndiyazi ukuba i-SEOmoz inegama elinamagama aphambili kunye nezixhobo eziphambili zamabinzana ngaphakathi komxholo wayo weprimiyamu, andikwazi ukuzithethelela ngexabiso le- $ 49 ngenyanga kwibhlog yam encinci.
Ilizwi Ndicelile ukuba ndenze iposti yebhlog exhaswayo kubo kwaye ndinomdla wokufunda okungakumbi ngeli shishini. I-Wordze ine- $ 45 ngenyanga yokubhalisela iphakheji kwaye kubonakala ngathi ineyona ingqokelela yomeleleyo yezixhobo endakha ndazibona malunga nophando lwamagama aphambili:
Nalu uluhlu lweempawu kunye nezixhobo oza kuzifumana kwi-Wordze:
Isixhobo segama eliphambili lophando- le yinjini apho ungafaka khona amagama kunye namabinzana kwaye ibuye nembali, isalathiso, inqanaba, ukubala kunye nezinye kubahlalutyi izixhobo ezinxulumene nebinzana kunye namanye amabinzana afana nawo.
Ngenisa amagama aphambili- ukuba uyingcali kwishishini, mhlawumbi ulwenzile uphando ngamagama aphambili kwixa elidlulileyo. I-Wordze yenze kwalula kuwe ukungenisa amanye amagama aphambili kwinkqubo yabo.
Ukhuphele iziphumo - uyazichaza.
igama elikhokelayo API -Lento eyomeleleyo ngokungummangaliso API ukudibanisa iLizwize kwinkqubo yolawulo lomxholo okanye usetyenziso. Ndinomdla wokwenene kule-ndingathanda ukubona umntu edibanisa umhleli ofaka iingcebiso zamagama aphambili njengoko ubhala.
Amagama aphambili aphosakeleyo- Esi sisicwangciso esingakhathalelwanga. Ukuba ndiyifakile indawo yam nge 'Itekhnoloji yebhlog yemakethi'kwaye'Ukuthengisa ibhlog yeteknoloji'okanye nje ukuthengisa kunye netecnology ngakumbi, ndingabamba ezinye izithuthi ezininzi ukuba ezinye iisayithi zinokungahoyi!
Imbali yamagama aphambili kuPhando-ujongo olwenziweyo lokujonga amagama aphambili kunye namabinzana.
UPhando lweeNjini zokuKhangela-sisixhobo esihle sokumba nzulu kwiziphumo zeinjini yokukhangela kunye nokufumana ukuba zeziphi ezinye iisayithi ezenzelwe zona.
Iiprojekthi - ukuba wenza uphando kwiiprojekthi ezininzi, usetyenziso lukuvumela ukuba uququzelele amagama akho aphambili kwiiprojekthi zokufikelela ngokukhawuleza kwisixhobo ngasinye.
Jonga iWebhusayithi- sisixhobo esipholileyo kakhulu apho unokufaka khona i-URL yephepha kwaye ufumane ingxelo kuwo onke amagama aphambili kunye namabinzana, kunye nokukwazi ukumba nzulu kulowo nalowo uhlalutyo oluthe kratya.
I-Thesaurus -I-Wordze ikwanayo nethesorasi eyomeleleyo apho unokufaka khona igama eliphambili kwaye ubuye namagama aphambili ongezelelweyo oza kuwasebenzisa, aluncedo kakhulu ukuba ufuna ukwakha umxholo owenzelwe ukuqhuba uPhando.
Ukukhangela i-WordRank -fumanisa ukuba ngubani na amagama aphambili ozama ukuwaqhuba.
Ukhuphelo -isakhono sokuvelisa lonke uphando lwakho lwamagama aphambili.
I-FAQs -Imibuzo ebuzwa Rhoqo- oku kufanelekile ubunzima bayo kwigolide, la macandelo aphendula yonke imibuzo onokuba nayo kuPhando lwamagama aphambili.
Iividiyo-ayikuthandi ukufunda? Aba bantu bade bapapasha iividiyo kuzo zonke izixhobo zabo kunye nendlela yokuzisebenzisa ngokupheleleyo!
Ewe, iLizze ibonelela ngenkqubo yokudibana!
Ngokombono wam othobekileyo, eyona nto intle kakhulu Ilizwi ngumbutho wezixhobo kunye nokulula ekuzifumaneni nasekuzisebenziseni. Ayisiyonto intle njengezinye izixhobo ngaphandle, kodwa akufuneki ibekho- olu luphando lwamagama ngokulunga!
Yintoni enokusetyenziswa yiLizze? Zonke izixhobo zi-static-cofa, shicilela, cofa, shicilela. Ndingathanda ngokwenene ukubona ukubanakho ukuhlela iigridi kunye nokwenza ngamandla iitshathi kunye nokucoca uluhlu. Umzekelo, ukuba bendinegama eliphambili lokuqhuba eliqale nge-15 kaMatshi, bendiya kufuna ukwenza uhlalutyo lwangaphambi kuka-Matshi 15 kunye nasemva kuka-Matshi 15 kulo lonke uhlalutyo lwam kunye nokutshata.
tags: I-google webmastersmavenlinkiphephaulawulo lweprokjekthiiziphumo zemidiya yoluntuulawulo lomsebenziukwenzauluhlu lokwenzatpiazzakuluhlu
UGoogle wongeza iifom kwiSpreadsheet zikaGoogle